In In सेन्टरसेट २-ह्यान्डल बाथरूमको नल
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW क्रोम बाथरूम नल Drain विधानसभा संग
रेटेड 4.745बाहिर आधारित 23 मूल्यांकन ग्राहक
(23 ग्राहक समीक्षा)
शैली, प्रदर्शन र किफायती आपूर्ति, wowowfaucet संग्रह कुनै पनि बाथरूमको लागि उत्तम पूरक हो। प्रति सेकेन्ड १.२ g को अधिकतम प्रवाह दरले पानी संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ। एक सिरेमिक डिस्क भल्भ कार्ट्रिज ड्रिप मुक्त कार्यक्षमता को एक जीवन प्रदान गर्दछ, साथै धातु दर जडान ड्रेन सेटअप पहिले भन्दा छिटो बनाउँदछ। दैनिक शौचालय हाम्रो लागि एक शानदार विकल्प
2321400C स्थापना निर्देशन
Inch इन्च सेन्टर बाथ नल 4C उचाई: 2321400 ″; फुटबल उचाई: 7.5 डिग्री; प्वाल आकार: २ - - mm 4.4 मिमी १ - १. 25 ″
क्रोम भ्यानिटी बाथरूम नल: लक्जरी क्रोम अन्त्य, मिरर जस्तो परावर्तक लुक, समकालीन बाथरूम सजावटको लागि उत्तम, भाँडा घर, कन्डोमिनियम, अपार्टमेन्ट, बाथरूम, वाणिज्य प्रयोग, रिसोर्ट
डबल ह्याण्डल बेसिन नल: २-ह्यान्डल लेआउट, तापक्रम र मात्रा समायोजित गर्न को लागी सरल, उच्च चाप टाउको तपाईं spout अन्तर्गत पर्याप्त निकासी प्रदान गर्दछ
उच्च गुणस्तर: NSF सिरेमिक डिस्कले कुनै चुहावट, टिकाऊ पदार्थ (SS201, र जिंक धातु), ABS aerator आपूर्ति सहज र नरम रूपमा पानी प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ
SKU: 2321400 XNUMX१C विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: निकास विधानसभा, पॉलिश क्रोम, हाजिर प्रतिरोध
एक *** ई2020-03-28
उत्कृष्ट डिजाइन, चिकना र आधुनिक उपस्थिति। नलको उच्च वृद्धिले तपाईंको हात वा टाउको धुने कोठाको साथ फोहोरको प्रवाह केन्द्रित गर्दछ।
काश तिनीहरूले एक समान डिजाइन मा एक भान्सा सिंक नल बनाएको।
एक *** ई2020-03-29
राम्रो नल र मूल्य। स्थापना गर्न सजिलो।
एल *** डी2020-04-02
मलाई यो नलको रूप मन पर्छ। बाथरूमको रूपमा ठूलो फरक पारियो। धेरै उचित मूल्य।
एल *** एल2020-04-05
मेरो बाथरूम को लागी उत्तम छ। कुनै थप लीकलुक्स क्लासिक छैन। राम्रो काम गर्दछ र पानी सजिलो र चिल्लो मा चालू।
मूल्य, गुण र शैलीसँग धेरै सन्तुष्ट, यो यतिखेर पल्म्बिंग प्रकार र ग्लोभको साथ आयो, म अन्य बाथरूम सिink्कको लागि मर्दछु भने अर्को पाउनेछु।
स्थापना गर्न सजिलो, राम्रो गुण जस्तै लाग्छ र धेरै राम्रो! धेरै धनी र मेल खाएको देखिन्छ।
धेरै सुन्दर, हामीसँग नाली स्थापना गर्न केही समस्या थियो, तर ग्राहक सेवा अद्भुत थियो र तिनीहरूले हामीलाई तत्काल मद्दत गरे!
जी *** ई2020-05-05
यो स्थापना गर्न धेरै गाह्रो थिएन: चरण-देखि-चरण दिशाहरू स्पष्ट छन् र सबै टुक्रा राम्ररी सँगै फिट हुन्छन् - राम्रो र प्रयोग गर्न सजिलो देखिन्छ - पुरानो faucets विपरीत हामी खराब स्थापना र जंगको कारण बाहिर देख्न सक्छौं। हामीले किनेको घरको मास्टर स्नानमा धेरै सानो डूबहरू थिए; यी भन्दा माथि भनिएको छैन र ठाउँ धेरै राम्रो फिट।
सी *** ई2020-05-07
नल यसको आत्म महान छ। म बिभिन्न नल नट किन्न सिफारिश गर्दछ एक प्रदान भयानक हो तिनीहरूले थ्रेड न सजीलो र पट्टी पनि सजिलो।
म *** n2020-05-10
हामीलाई यो पक्षको रूप मनपर्दछ र निर्मित गुणवत्ता मूल्यको लागि सभ्य छ, तर हाम्रो नालीले राम्रोसँग व्यवहार गर्दैन जसले यसलाई बन्द गर्न असम्भव बनाउँछ र सि with्क पानीले भरिन्छ।
धेरै राम्रो। राम्रो देखिन्छ। हिरन को लागी राम्रो धमाका!
एल *** y2020-06-01
नल स्थापना गर्न सजिलो छ र राम्रो देखिन्छ! यो लागत को लागी धेरै भारी शुल्क हो। पप-अप स्टापर एक फरक कहानी हो। यो सानो छ, ठूलो प्लास्टिक र समायोजित गर्न धेरै गाह्रो। एक राम्रो गुण एक किन्नु पर्छ र समावेश गरिएको नाली प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ।
मलाई मेरो केटाहरूको बाथरूमको लागि एक नल चाहिएको थियो र यो आईटी हो !! यो वास्तवमै धेरै राम्रो छ। यो पनि डुल्छ जुन मलाई थाहा थिएन। हामीले भर्खरै यो स्थापना गर्यौं तर यो राम्रो गुण देखिन्छ!
सजिलो स्थापना र डेल्टा जत्तिको राम्रो यो प्रतिस्थापन। धेरै प्रिमियम देखिन्छ, ब्रश निकल भन्दा बाहिरी रूप मा अधिक स्टेनलेस यद्यपि
एम *** एल2020-06-18
राम्रो देखिन्छ र हाम्रो सानो RV सिंक धेरै अधिक उपयोगी बनायो।
म *** आर2020-07-03
भरपर्दो मात्रा र यस नलको आधुनिक डिजाइन। घरको बाथरूममा उत्तम फिट।
जी *** डी2020-07-03
हामी यी नलहरूलाई माया गर्छौं
मुख्य बेडरूम बाथको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। स्थापना गर्न सजिलो छ, स्पष्ट निर्देशनहरू छन्। बाथरूम व्यवस्था संग राम्रो देखिन्छ।
एफ *** ई2020-07-16
मेरो आमा बाथरूम मा राखिएको धेरै राम्रो थियो।
एच *** एन2020-07-19
मलाई यो लुक मनपर्‍यो, यो यसको लागत भन्दा बढी देखिन्छ। ह्यान्डलहरू चिल्लो हुन्छ। पप अप ड्रेन राम्रो काम गर्दछ।
यो एक सुन्दर नल हो जुन मेरो बाथरूमलाई राम्रो राम्रो डिजाइन गरीएको बधाई हो र यसको मूल्यको लागि यसको मूल्य छ अब मैले यस उत्पादनको साथ खुशी गरें।
न केवल यो मैले पाएको सबैभन्दा भव्य faucets को एक हो, मेरो पतिले यो स्थापित गर्न धेरै सजिलो थियो र चश्मा विज्ञापन को रूप मा छन् भने। नलको विक्रेतासँग रेकर्ड समयमा उत्पाद हामीसँग थियो र धेरै उत्तरदायी रहेको छ। म केवल घरमालिक मात्र होइन, म एक रियल्टर पनि हुँ। म यस उत्पाद र विक्रेतालाई मेरो कुनै पनि साथीहरू र घर जग्गा ग्राहकहरूको लागि सिफारिश गर्दछु।
महान ग्राहक सेवा र शानदार उत्पादन को लागी धन्यवाद!
म यो मूल्य पोइन्टको लागि यस गुणको नलको आशा गर्दिन। मैले यस ब्राण्डको बारेमा पहिले कहिलै पनि सुनेको थिइनँ, र यो आईपुग्दा गुणसँग धेरै प्रभावित भएँ। भित्र सबै काँसाका भागहरू, धेरै गह्रौं, कुनै प्लास्टिक, स्थापना गर्न सजिलो ,समेत नालीको भाग राम्ररी डिजाइन गरिएको थियो। यो अपरेट गर्न पुश बटन हो। त्यो गाह्रो हिस्साले पुरानो नाली निकाल्दै थियो। मेरो श्रीमान् एक सुलभ मानिस जस्तो मान्छे होइन र उसले पुरानोलाई बाहिर निकालेको थियो, नयाँ व्यक्ति भित्र थियो र सबै कुरा घण्टा भन्दा कममा राखियो। र सबै भन्दा राम्रो भाग - कुनै थप Drippy नल !! मेरो अर्को पानी बिल हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन!
WOWOW स्वचालित साबुन डिस्पेंसर वाल माउन्ट
WOWOW मैट कालो बाथरूम नल4ईन्च केन्द्र
वाह बाथरूम सिंक नल4इंच केन्द्र तेल रु ...